Charter flights jikọọ Seychelles na Romania
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Charter flights jikọọ Seychelles na Romania
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Iwughachi • Akụkọ gbasara Romania • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Agwaetiti Seychelles na-atụ anya ìgwè ndị ọbịa sitere na ahịa ọwụwa anyanwụ Europe nke Romania ka Air Seychelles bidoro usoro iwu ọhụrụ echi Fraịde, Eprel 30, 2021.
Flightgbọ elu ụgbọelu mbụ na-ebute ụzọ ga-amalite ọrụ n'etiti Seychelles na Romania.
Ndị na-ede akwụkwọ a kwa izu ga-aga n'ihu ruo na Mọnde, Mee 17, na-abịa azụ maka oge ọkọchị na Ọgọstụ ma mesịa n'oge oyi na Disemba.
Nke a na-aga nke ọma na mbọ mbọ mgbake njem Seychelles ka ọtụtụ ahịa na-ahụ agwaetiti dị ka ebe dị nchebe.
Gbọ elu ụgbọ mmiri nke Indian Ocean na-arụ ọrụ ụgbọelu na-arụ ọrụ n'etiti isi obodo Romania, Bucharest na agwaetiti Mahé, na-abụ ụgbọ elu ụgbọelu mbụ na-ejikọ mba abụọ ahụ.
Maka njem mbụ ya, ụgbọ elu elekere 9, nke ụgbọ elu Air Seychelles 168-oche nke oche A320Neo na-ere ere wee tụọ anya ka ọ daba na ọdụ ụgbọ elu mba Seychelles na awa 0930.
Hapụ Bucharest na 2300 awa na Tọzdee, ụgbọ elu ahụ ga-eme nkwụsị na-anọghị n'etiti teknụzụ na Cairo, Egypt maka mmanụ tupu ọ maliteghachi ụzọ ya na Seychelles.
gaa ụgbọelu Romania